Ny soratra masina koa dia manome endrika ny toetra maha-olona amin'ny Fanahy Masina ary manandratra ny mombamomba ny Fanahy ankoatry ny fampiasana azy fotsiny. Manana ny sitrapo ny Fanahy Masina (1 Korintiana 12,11: "Fa ireo rehetra ireo dia manome ilay fanahy tokana ary manome izay rehetra tadiaviny"). Ny Fanahy Masina dia mandinika, mahalala, mampianatra ary mampiavaka (1 Korintiana 2,10: 13).
Ny Fanahy Masina dia manana fihetseham-po. Ny fanahin'ny fahasoavana dia azo foanana (Hebreo 10,29) ary malahelo (Efesiana 4,30). Ny Fanahy Masina dia nampionona anay ary, toa an'i Jesosy, dia nantsoina ho mpanampy (Jaona 14,16). Amin'ny faritra hafa ao amin'ny Soratra Masina, ny Fanahy Masina dia miteny, mandidy, manaporofo, mandainga, miditra, miezaka, sns ... Ireo rehetra ireo dia mifanaraka tsara amin'ny toetra.
Ny Baiboly dia mampiavaka ny toetran'Andriamanitra amin'ny Fanahy Masina. Tsy voalaza izy hoe manana anjely na toetran'ny olombelona. Hoy ny Joba 33,4: "Ny Fanahin'Andriamanitra no nanao ahy, ary ny fofonain'ny Tsitoha no nanome aina ahy". Ny Fanahy Masina dia manangana. Mandrakizay ny saina (Hebreo 9,14). Mampiharihary izany (Salamo 139,7).
Fikarohana ny soratra masina dia ho hitanao fa ny Fanahy dia mahefa ny zavatra rehetra, manam-pahaizana ary manome fiainana. Ireo rehetra ireo dia fananan'ny toetra masina. Vokatr'izany, ny Baiboly dia mamaritra ny Fanahy Masina ho masina.